စာအုပ်စင် – Everybody Read TChen
ဘန်ကောက် ကီနိုကုနိယ က ၂၀ ရက်နေ့ကနေစပြီး စာအုပ်တွေ ဈေးချပါတယ် သြဂုတ်လ ၂ ရက်နေ့ ထိ ချမယ် ပြောပါတယ် ဖြစ်ချင်တော့ ကိုယ်က ဈေးစချတဲ့ နေ့ က ရောက်သွားပါတယ် သူငယ်ချင်း နဲ့ ကိုယ် နှစ်ယောက် ပေါင်းပြီး တော်တော်ဝယ်ဖြစ်ပါတယ် တနေ့ က ပိုစ့် ထင်ပြီးပါပြီ နောက်နေ့ ကျတော့ မကျေနပ်သေးတာနဲ့ ထပ်သွားပါသေးတယ် တော်တော်ကို ချတာပါ ကြေငြာထားတာကတော့ အပ်တူ ၇၀% ထိ လို့ ဆိုပါတယ် တကယ်က မကဘူးထင်ပါတယ် ဝတ္ထုတွေဆို ဘတ် ၅၀ ပဲ မြန်မာငွေနဲ့ တွက်ရင်တောင်တန်ပါတယ် မြန်မာစာအုပ်ထက်ကို ဈေးပေါတယ် စာရွက်အသားကောင်းတယ် ကျန်တာကတော့ ပြောစရာမရှိ ဒီလိုမျိုးက ကြုံခဲ့တယ် တနှစ်မှ တခါ ပဲထင်တယ် ကိုယ်ကတော့ ဒီမှာနေတာ ၃ နှစ်ရှိပြီ ထားတော့ အရင်ကလဲ ဝယ်ပါတယ် အရင်က ဘတ် ၃၀၀၀ ဖိုး ဝယ်ရင် ၄ ၅ အုပ်လောက်ပဲ ရတာ ခု က ဘတ် ၃၀၀၀ ဖိုး ဝယ်ရင် အုပ် ၂၀ လောက်ရတယ် ဆိုတော့ ဘယ်ပြောကောင်းမလဲအန်တီချမ်းတို့ နှစ်ရက်ရှိပြီ ရောက်တာ တခါ ကို ၅ နာရီထက်မနည်းပဲ ခြေထောက်တောင့်နေအောင် ရပ်ပြီး ကြည့်တာနော်…သူက တကယ်တော့ ရောင်းမကောင်းတဲ့ စာအုပ်တွေ ချတာပါ နာမည်ကြီး စာရေးဆရာတွေမပါဘူး ဥပမာ ဟယ်ရီပေါ်တာတို့ တွိုင့်လိုက် တို့ မပါဘူး ဂေါ့ဇစ်ပ်ဂဲလ် လဲ မပါဘူး ကိုယ်လိုချင်တာတွေပြောနေတာ သို့သော် သူက အမျိုးအစားစုံချတယ် တရုတ်စာအုပ်တွေလဲပါတယ် နည်းနည်း ဝယ်ခဲ့တယ် ဆေးစာအုပ် လီဒါးရှပ် ဘီးဇိနက် အို အကုန်အကုန် ကာတွန်းတွေလဲ ချတယ် သူရဲစာအုပ်တွေကော ဝယ်ကောင်းကောင်းနဲ့အသေဝဝယ်တာပဲ နောက်နေ့ ထပ်သွားအုံးမယ်လဲမှန်းပါတယ် ကိုယ်ကလဲ စာအုပ်သရဲလေ…..နင်နဲ့ငါ လယ်ပြင်မှာတွေ့ကြပြီပေါ့ ကီနိုကုနိယ ရယ် ညှင်းညှင်းညှင်း ဆိုပြီး ပါရာဂွမ်ထဲမဝင်ခင် ကိုယ်ပျောက်ဝိဇ္ဇာ ဓါးသမား ပုံစံ နဲ့ ကျူးရင့်ပါသေးတယ် မြင်ယောင်သာကြည့်ကြပေတော့ ပြီးတာနဲ့ ပိုက်ဆံအိတ်ထဲ ကခရက်ဒစ်ကဒ် ကို လက်နက်ပုန်း ထုတ်သလို ရွှတ်ခနဲထုတ်ပြီး သကလာ ဝှစ်ဝှစ်ဝှစ် ဆိုပြီး တက်သွားပါတော့တယ်……
ထားတော့ အဲ့တာနဲ့ ဘလာဘလာဘလာ တွေကိုကျော်လိုက်ရင် အောက်က ပုံတွေရောက်တာပဲ ဒီပိုစ့်တင်ရတဲ့ နောက်ကွယ်က အတွေးအခေါ်က ဒီလိုပါ….ဝယ်လာတဲ့ စာအုပ်တွေကို ကြွား အဲလေ ပိုစ့် တခု အဖြစ် တင်ထားရင် ကောင်းမယ် ဆိုပြီး ဓါတ်ပုံ ရိုက် ပိုစ့်တင် သေချာ ကြွား အဲလေ စကားက ခဏခဏ မှားတယ် ….သေချာ ပြန်စုထားတဲ့ သဘောပါ
ကြွားတာ အဲလေ….ရှယ်တာ အားမရလို့ မြန်မာပြည်က သူငယ်ချင်းတွေကိုတောင် ပီဒီအက်ဖ် နဲ့ မေးလ် ပို့တော့ တယောက်က သတ်ချင်တယ် ပြောပါတယ် မေတ္တာထားကြတယ်လေ ငှဲငှဲငှဲ….
ကဲ ကြိုက်သလောက်သာ သဘောရှိ ဂလောဟိ ကြည့်ကြပေတော့ ….
သူ့ပိုစ့် ကို ဘတ်ပြီးတော့ အကြံပေါ်တာဆိုတော့ ကိုယ့် အပြစ်မဟုတ် မေတ္တာပို့ချင်ကြရင် အဲ့လို အကြံကောင်းရအောင် ပေးတဲ့ ဒေါ်ရီတာ ကိုသာ ပို့ ကြပေတော့ ……..
Posted on July 23, 2011 February 7, 2018 Categories Uncategorized, Uncategorized, စာအုပ်စင်10 Comments on တီတီ့ စာအုပ်စင်